Hargeysa oo Isbaarooyin Yeelatay
.. W/Q: Cabdi Maxamed
Thursday 6th December 2018 09:28:23 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Adeegsiga jidadka danta guud ah (public roads) iyo xoriyad ku marista waddooyinka dalku
waa xuquuq ay muwaadiniinta reer Somaliland iyo dadka dalka sharciga ku joogaaba si isku mid ah u leeyihiin oo aan laga duudsiyi Karin.
Jidadku waa cunsur aad muhiim u ah marka ay timaado kor u qaadista isu socodka, is dhex galka iyo iskaashiga bulsho ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhaqankaba. Jidadku waxa ay qayb libaax ka qaataan horumarinta wax soo saarka bulshada, caafimaadka, wax barashada, iyo nabadgelyada guud ee qaranka.
Diinta islaamka iyo xeerarka sharci ee dawladda JSL ba waxa ay si cad oo aan gabasho lahayn u xaaraantimeeyeen in isbaaro la dhigto meel waddo ah oo ay dadka iyo duunyaduba maraan iyadoo laga duulayo dano gaar ah iyo baahi cid ku kooban.
Iyadoo ay jiraan xeerarkii wado marista ee uu baarlamaanka JSL ansixiyey isla markaana uu madexweynahu dhaqangaliyey oo ay dhisan yihiin haayadihii qaranku u igmaday fulinta hannaanka wado marista iyo aadeegsiga waddooyinka ee sharciga ah ayaa hadana ilaa imika waxaa jira dad muwaadiniin ah oo cashuur bixiyeyaal ah oo si awood sheegasho ah loogu diiday in ay maraan jidadkii geyn lahaa guryahooda ama goobahooda ganacsi.
Awood sheegashada aan sharciga ahayn ee muwadiniinta reer Somaliland iyo dadka kaleba lagu cadibayo ee jidadka loogaga xidhanayaa ma aha mid ka timid laamaha kala duwan ee dawladda JSL balse waa mid ay dad ashqaas ahi si badheedh ah danahooda ugu fushanayaan iyagoo iska indho tiraya xuquuqdii iyo xeerarkii dadka u ogolaanayay marista jidadka dalka.
Isbaarooyinka la dhigtay iyo dariiqyada dadka laga hor istaagay in ay xoriyad ku maraan waxaa ka mid ah laba waddo oo ku yaala xaafadda Masalaha ee magaalada Hargeysa oo ay si wada jir ah u dhiseen dadweynaha xaafadda deggen iyo Dawladda Hoose ee magaalada Hargeysa.
labadaas waddo oo midina ay dhinaca koonfureed ka marto hudheelka weyn ee Ambassador Hotel ta kalena ay dhinaca galbeed ka marto ayaa waxa ay muddo dheer oo sanaddo ah u xidhan yihiin mulkiilaha hudheelkaasi Khadar Aadan Xuseen (khaddar Ambassador) oo sifo aan sharci ahayn jidadkaas u dhex dhigtay shubab waaweyn iyo biro dhaadheer oo dadka lagu baadho, xataa haddii dadkaasi aanay u socon meheraddiisa oo ay yihiin qaar wadada iska maraya waa la baadhaa.
Marka laga yimaaddo shirkadda Salaama Security service oo ah shirkad gaar loo leeyahay saamileydeedana uu ku jiro Khadar Ambassador oo ay shaqadeedu tahay ilaalinta xafiisyada haayadaha madaxa bannaan waxa nabadgelyada xaafadda iyo ta guud ee wadankaba si toos ah gacanta ugu haya oo qaranka uga wakiil ah laamaha amniga ee jamhuuriyadda somaliland mana jirto sabab cid aan qaranku u dirsani ay isugu xil saarto ilaalinta nabadgelyada dadka iyo dalka.
W/Q: Cabdi Maxamed
Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro Oo Ka Jawaabay Xujadii Madaxweyne Muuse Ee 18-May Ka Soo Qayb Gal [Ficiltan Qarankii La Had
"Cabdiqaadir Waxaan Leeyahay Intaa Cabdiraxmaan Cirro Keenaysaan Waanu Idin Maagaynaa" G Guurtida Somaliland
"Xisbi Qaran Baanu Nahay Muraadkayaguna Waa Inaan Kursiga Helo" Cabdiqaadir Jirde
[Xaasaasi:-] Seddax Ka Mid Ah Saraakiishii Maxamed Siyaad Barre Oo Qurbaha Ku Badbaadi Waayay.
Ciidanka Dab damiska Hargeysa oo Badbaadiyay ilmo Yar oo Suuli ama Musqul lagu Riday.
Wasiir Maxamed Kaahin oo Sheegay Inaanay Ganacsatada Waaweyn Ee Somaliland Bixin Cashuurta Balse Danyarta Laga Qaado
[Deg Deg:-] Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro Oo Warbaahinta Isugu Yeedhay "Xadhiga Xildh. Dhakool Waa Sharci Daro"